EU बाट बेलायतमा कार आयात गर्दै | मेरो कार आयात
EU बाट बेलायतको लागि कार आयात गर्दै
हामी अनुरूपताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर युके रेजिष्ट्रेसनमा विशेषज्ञहरू हौं।
तपाइँ हामीबाट तपाइँको प्रमाणपत्र खरीद गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई दर्ता पनि गर्न सक्नुहुन्छ - पूर्ण एक स्टप सेवा!
युरोपबाट बेलायतमा तपाईंको गाडी आयात गर्दै हुनुहुन्छ?
हामी युरोपबाट दर्ता गर्ने अधिकांश कारहरू उनीहरूका मालिकहरू द्वारा बेलायत लगिएका हुन् र पहिले नै यहाँ छन्, केवल सर्टिफिकेट अफ कन्फर्मिटी, VCA र DVLA को साथ आयात दर्ता प्रक्रिया आवश्यक छ। हामी तपाईंको कार कुनै पनि ईयू सदस्य राज्यबाट बेलायत पठाउन सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्हाल्न सक्छौं।
हामी प्राय: सडकमा गाडीहरूलाई ट्रक गर्दछौं पूर्ण बिमा गरिएको ट्रान्सपोर्टर सवारी साधनहरूमा, तर पनि रोल अफ अफ रोलप शिपिंग सेवाहरू अधिक दुर्गम क्षेत्रहरूबाट। ट्रान्जिटको बेलामा तपाईंको गाडी पूर्ण बिमा हुन्छ र प्रायः जसो अवस्थाहरूमा हाम्रो परिसरमा डेलिभर हुनेछ, यद्यपि हाम्रा ग्राहकहरूको थोरै संख्या उनीहरूलाई गाडी पुर्‍याउन रुचाउँछन् र डीभीएलएलाई दर्ता गर्नको लागि आवश्यक कागजातहरू प्रशोधन गर्नको लागि हाम्रा सेवाहरू प्रयोग गर्दछन्। गाडी यो धेरै वाहन विशिष्ट कारकहरूमा निर्भर गर्दछ त्यसैले यदि तपाईं निश्चित हुनुहुन्न भने सम्पर्कमा नहिचकिचाउनुहोस्।
यदि तपाईं युनाइटेड किंगडममा आगमनमा गाडी चलाउन चाहानुहुन्छ र कागजको कारोबारको लागि हाम्रा सेवाहरू चाहिन्छ। कृपया युनाइटेड किंगडममा तपाईंको गाडी चलाउन बीमा जाँच गर्नुहोस्। यो अमान्य हुन सक्छ तर सम्पर्कमा आउन नहिचकिचाउनुहोस् यदि तपाईंलाई बिमा आवश्यक पर्दछ भने - हामी VIN नम्बर प्रयोग गरी गाडीको बीमा गर्न सक्ने धेरै संख्याका बीमाकर्ताहरू प्रयोग गर्छौं।
पेशेवरहरूको एक सुपर कुशल टीमले यो कम्पनी अत्यधिक सिफारिश गर्दछ। तिनीहरू तुरुन्तै सबै चीजहरू सम्हाल्छन् र तपाइँ प्रक्रियाभरि तपाइँलाई सूचित राख्नुहुन्छ। तिनीहरूको टीम वर्क प्रशंसनीय छ र तिनीहरू सबै त्यस्ता राम्रा व्यक्तिहरू पनि छन्! कुनै पश्चाताप र कुनै तनाव छैन! तपाईको सहयोगका लागि धन्यबाद मेरो कार आयात! "
- आईपल बाट ओपल Zafira - आयरल्यान्ड
के तपाईको गाडी १० वर्ष मुनिको छ?
बेलायत आइपुगे पछि तपाईको गाडीले युके प्रकारको अनुमोदनको पालना गर्नु पर्छ। हामी या त यो प्रक्रिया पारस्परिक मान्यता भनिन्छ वा IVA परीक्षण मार्फत गर्न सक्छौं।
१० बर्ष भन्दा बढि उमेरका वाहनहरूको आयात प्रक्रिया
युरोपबाट बायाँ ह्यान्ड ड्राइभ कारहरूलाई केही परिमार्जनहरू आवाश्यक हुन्छन् जसमा हेडलाइट बान्कीमा गाडी आउने ट्राफिकको उज्यालोपनाबाट जोगिन, स्पीडो प्रति घण्टा पढ्ने माईल प्रदर्शन गर्न र रियर फोग लाइट पहिले नै यो विश्वव्यापी अनुरूप छैन भने। हामीले आयात गरेका सवारी साधनहरूका मेक र मोडेलहरूको विस्तृत सूची तयार पारेका छौं। त्यसोभए तपाईंलाई आफ्नो व्यक्तिगत कारले के चाहिन्छ भनेर द्रुत लागत अनुमान दिन सक्दछौं।
धेरै पेशेवर र राम्रो संचार, सबै कुराकानी पहिलो कुराकानी मा समय सीमा अनुसार थियो। धेरै राम्रो काम यस तरीकाले राख्नुहोस्।
-2016 फोक्सवैगन गोल्फ १.1.6 टीडी, LHD RO बाट - रोमानिया
१० बर्ष भन्दा बढी उमेरका वाहनहरूको लागि आयात गर्नुहोस्
दश वर्ष भन्दा पुराना EU भित्रका सवारी साधनहरू प्रकार अनुमोदन छुट छन्। यसको मतलब उनीहरूलाई हाम्रो पारस्परिक मान्यता योजनाको लागि IVA परीक्षणको आवश्यकता पर्दैन भन्ने होइन। यो सम्भव छ कि उनीहरूलाई अझै पनि MOT परीक्षण पास गर्न परिमार्जनहरू आवश्यक पर्दछ - तर यसले दर्ताको मार्गलाई धेरै सामान्य बनाउँछ।
तपाईको गाडी आयात गर्नमा के समावेश छ?
युनाइटेड किंगडममा गाडीहरू 'सडक' हुन अनिवार्य छ र उनीहरूले उद्देश्यका लागि उपयुक्त र सुरक्षित छन् भनेर प्रमाणित गर्न MOT आवश्यक पर्दछ।
धेरै सवारी साधनहरूलाई बीम बान्की समायोजन गर्न सानो परिवर्तनको आवश्यक पर्दछ अन्य प्रकाश सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई अन्धा नदिनुहोस् भनेर सुनिश्चित गर्न। युनाइटेड किंगडममा रियर फोग बत्तीहरू पनि आवश्यक छ, त्यसैले गाडी फिट छैन भने यि फिटिंग चाहिन्छ।
यद्यपि सबै परिमार्जनहरू सामान्यतया सवारीसाधनमा निर्भर हुन्छन्।
हामीसँग मेरो कारको आयातबाट शीघ्र र मैत्री सेवा रहेको छ र उनीहरूको व्यवसायको सबै पक्षहरू ह्यान्डल गर्न उनीहरूको विशेषज्ञताको सिफारिश गर्दछौं ......
-१ 1997 2.4 T टोयोटा हिलक्स, २.XNUMX डिजेल, हरियो, एफआरबाट लिनुहोस् - फ्रान्स - पूर्व युके कार
EU बाट बेलायतमा गाडी आयात गर्दा आयात कर कति छ?
ब्रेक्सिट ट्रान्जिसन अवधिको अन्त्य पछि, बेलायतमा गाडी आयात गर्दा आयात करका लागि विभिन्न नियमहरू लागू हुन्छन्।
यदि तपाइँ युकेमा सर्दै हुनुहुन्छ र6महिना भन्दा बढीको लागि तपाइँको गाडीको स्वामित्व छ भने 12 महिना भन्दा बढी युके बाहिर बस्दै गर्दा, तपाइँ HMRC ट्रान्सफर अफ रेसिडेन्सी योजना प्रयोग गरी सवारी कर मुक्त आयात गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईंले EU मा गाडी किन्नु भएको छ र यसलाई युकेमा आयात गर्नुभयो भने, तपाईंले 20 वर्ष मुनिको उमेरमा 30% आयात VAT, र5वर्ष भन्दा माथिको उमेरमा 30% VAT तिर्नु हुनेछ। यो तपाइँको खरिद इनभ्वाइस र UK मा कुनै पनि यातायात लागत मा गणना गरिन्छ।
के तपाईं मेरो सवारी चलाउनमा मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाईंको गाडी जहाँ भए पनि हामी विश्वस्त छौं कि हामी तपाईंको गाडीको ढुवानीको लागि सुरक्षित र सुरक्षित माध्यम दिन सक्छौं।
चाहे हामी सवारी या शिपिंग प्रयोग गर्दैछौं वा इनल्यान्ड ट्रकिंग प्रयोग गर्दै छौं हामीसँग एजेन्टहरूको विस्तृत नेटवर्क छ जसले तपाईंको कार सुरक्षित युनाइटेड किंगडममा पुग्नको लागि सहयोग गर्न सक्छ।
हामीलाई किन तपाईंको गाडी EU बाट बेलायतमा आयात गर्नका लागि रोज्नुहोस्?
हामीले सफलतापूर्वक हाम्रो ग्राहकहरूको लागि मेरो आफ्नै कार आयात समर्पित डीवीएलए खाता प्रबन्धकको पहुँचको लागि पैरवी गरेपछि, परीक्षण चरण पार गर्दा, दर्ता वैकल्पिक विधिहरू भन्दा छिटो स्वीकृत गर्न सकिन्छ।
तपाईको गाडीलाई परीक्षण र दर्ताका माध्यमबाट ढुवानी गर्न - हामी सबै चीजको ख्याल गर्छौं। बाँकी रहेको सबै तपाइँको नयाँ युके नम्बर प्लेटहरू फिट गर्नका लागि छ र हामी गाडीलाई या त संग्रह वा डेलिभरीको लागि तपाइँको मनपर्ने स्थानमा तयार गर्दछौं।
एक सुव्यवस्थित, सुविधाजनक प्रक्रिया जुन धेरै बर्षहरूमा तयार गरिएको छ, युरोपबाट युकेमा कार आयात गर्न सजिलो हुन सक्दैन। तपाइँको आवश्यकताहरु को माध्यम बाट चलान को लागी र अधिक पत्ता लगाउन, हामीलाई आज +44 (0) १1332२ 81१ ०0442२२ मा सम्पर्क गर्नुहोस्।
के हामी केवल EU बाट कार आयात गर्दछौं?
EU ले युनाइटेड किंगडममा सवारी साधन आयातको एक ठूलो अनुपात बनाउँछ, यद्यपि विश्वभरबाट असंख्य निजी आयातहरू छन् जुन हामी प्रत्येक महिना सहयोग गर्दछौं।
हामी अष्ट्रेलियाबाट युनाइटेड किंगडम सर्ने बासिन्दाहरूलाई स्थानान्तरण गर्न मद्दत गर्दछौं, र व्यक्तिगत व्यक्तिहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट क्लासिक गाडी आयात गर्दछन्।
त्यहाँ हामी आयात गर्न र सवारी दर्ता गर्न नसक्ने कुनै ठाउँ छैन, त्यसैले यदि सम्पर्क EU बाहिर छ भने सम्पर्कमा नहिचकिचाउनुहोस्।
हामी कस्तो प्रकारको सवारीसँग काम गर्छौं?
एक-बन्द उत्पादन वाहनहरूबाट मिलियन-पाउन्ड सुपरकारहरूमा हामीले विभिन्न सवारीहरूको अधिकता दर्ता गर्न मद्दत गरेका छौं। रेजिष्ट्रेसनको लागि मार्ग प्रत्येक सवारीका लागि फरक हुन्छ तर हामी विश्वास गर्दछौं कि हामी सहयोग गर्न सक्दछौं।
निश्चितको लागि थाहा पाउने उत्तम तरिका भनेको हाम्रो उद्धरण अनुरोध फारम भर्नु हो जुन हामीलाई सबै विवरणहरू दिन्छ जुन हामीलाई तपाईंलाई सही उद्धरण दिनको लागि जान्नु आवश्यक पर्दछ।
के हामी तपाईंको गाडी सेवा गर्न सक्दछौं? वा हामी कुनै वैकल्पिक अतिरिक्त प्रस्ताव गर्दछौं?
हाम्रो प्रतिस्पर्धी विपरीत, हामी हाम्रो परिसर मा आफ्नो समय खर्च गरिरहेका सवारी साधनहरूको लागि कुनै पनि नियमित सेवा दिन हामी खुशी छौं। हामीलाई लाग्दछ कि तपाईंको गाडीको सेवा गर्नु राम्रो काम हो जब सवारीहरूले ठूलो संख्यामा व्यर्थ खर्च गर्दछन्।
हामी तपाइँको कार र थैचम रेटेड ट्रैकर्स को रूप नवीकरण गर्न पेशेवर विवरण प्रदान गर्दछौं जुन तपाइँको समग्र बीमा दर्तामा लेराउन सक्छ।
मेरो कार आयात मोटरिंग को बारे मा उत्साहित छ र हामी आशा गर्दछौं कि तपाईले गर्नु भएको प्रत्येक अनुरोध हामीले पूरा गर्न सक्दछौं।
के तपाईले हाम्रो परिसरमा गाडी ल्याउनु पर्छ?
गाडीको उमेरमा निर्भर गर्दै हामीलाई हाम्रो परिसरमा आउन पनि आवश्यक पर्दैन। यदि गाडी धेरै जसो केसहरुमा १० बर्ष भन्दा पुरानो छ भने तपाईले स्थानीय ग्यारेजमा परिमार्जनका लागि आवश्यक परिमार्जनहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
हामी तपाईको तर्फबाट कुनै कागजको ख्याल राख्छौं। यसले समय बचत गर्दछ र यसको मतलब तपाईको गाडी वास्तवमा कहिल्यै आउँदैन।
यदि तपाईंको कार रिमोट रेजिष्ट्रेसनको लागि उपयुक्त छ भने हामी तपाईंलाई जानकारी दिन्छौं तपाईंले उद्धरणको लागि फारम भर्नुभएपछि।
अस्थायी रूपमा तपाईंको सवारी आयात गर्नमा के नियमहरू छन्?
यदि तपाईं बेलायतमा विस्तृत समयको लागि बस्ने योजना गर्दै हुनुहुन्न भने, र वाहन पहिले नै ईयुमा छ भने तपाईं आफ्नो विदेशी प्लेटहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ यूकेमा तपाईंको गाडी दर्ता वा कर बिना।
यो अनुमति मात्र यदि तपाईं केवल यूनाइटेड किंगडम भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ र यहाँ बस्न योजना छैन भने मात्र अनुमति छ। कुनै स्थायी रेसिडेन्सीको लागि - तपाईंको गाडीको दर्ता आवश्यक पर्दछ।
सवारी साधन मूल देश मा दर्ता, कर, र बीमा हुनु पर्छ। त्यसो गर्न असफलताले दुर्घटनामा पर्दा समस्याहरू सिर्जना गर्न सक्दछ।
तपाईंको सवारी वाहन यूनाइटेड किंगडममा कूल months महिना सम्म रहन्छ। जे होस् यदि यो १२ महिना अवधिमा धेरै छोटो भेटहरूको लागि हो भने त्यो स्वीकार्य पनि हो।
यदि तपाईं युनाइटेड किंगडममा यसको लामो अवधिको लागि आफ्नो गाडी राख्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, कृपया दर्ताको सम्बन्धमा सम्पर्कमा नहिचकिचाउनुहोस्।
म मेरो कार ड्राइभ गर्न चाहन्छु जहाँ यो दर्ता भइरहेको छ?
IVA परिक्षणको आवश्यक्ता नहुने सवारी साधनहरूको विशाल संख्याको लागि हामीलाई कुनै पनि विस्तृत समयावधिको लागि तपाईंको EU गाडी अनसाइट लिनु आवश्यक पर्दैन। हामीले ग्राहकहरूको बढ्दो प्रवृत्ति देख्यौं जसले युनाइटेड किंगडममा आफ्ना सवारी साधनहरू चलाएका छन् र अनुपालनको लागि केवल उनीहरूको परिमार्जन आवश्यक छ। यदि तपाईं अझै फोरजिन रेजिष्ट्रेसन प्लेटहरूको वरिपरि ड्राईभ गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईंको बीमाले तपाईंलाई कभर गर्छ भने, हामी अक्सर तपाईंको कार 'समान दिन पञ्जीकरण' मा फिट गर्न सक्दछौं।
तपाईं आफ्नो गाडी क्यासल डोनिंग्टनमा हाम्रो परिसरमा ल्याउनु हुन्छ र हामी तपाईंको गाडीलाई युनाइटेड किंगडममा प्रयोगको लागि अनुरूप बनाउनको लागि परिमार्जन गर्न सक्दछौं जब तपाईं पर्खनुहुन्छ। त्यसो भए MOT परीक्षणको लागि लिईन्छ कि गाडी सडकको लागि योग्य छ भन्ने निश्चित गर्न र यदि त्यहाँ कुनै मुद्दा छैन भने तपाईंलाई एक MOT पास प्रमाणपत्र जारी गरिनेछ।
एकचोटि हामीसँग तपाईंको मोट प्रमाणपत्र छ तपाईं आफ्नो विदेशी पंजीकरण प्लेटहरू संग तपाईं कार टाढा लिन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईंको तर्फबाट दर्ता आवेदन बुझाउनेछौं र जब तपाईंको नयाँ दर्ता नम्बर प्राप्त हुन्छ विदेशी प्लेटहरू एक्सचेन्ज गर्न सकिन्छ जीबी रजिष्ट्रेसन प्लेटहरू हामी तपाईंलाई पोष्ट गर्दछौं।
यो तपाईंको EU गाडी दर्ता गर्न को लागी एक सरल तरीका हो यदि तपाईं यसलाई दैनिक आधारमा प्रयोग गर्नु पर्छ भने।
यदि तपाईं केहि अलि टाढा हुनहुन्छ र यसलाई हाम्रो परिसरमा लैजान सक्नुहुन्न तर तपाईंको सवारी गाडी युनाइटेड किंगडममा छ भने हामी गाडीको पञ्जीकरणमा पनि मद्दत गर्न सक्दछौं र तपाईंको ग्यारेजमा काम तपाईंको हातमा छ आवश्यक काम मा।
दर्ताको लागि मार्ग पत्ता लगाउने उत्तम तरिका उद्धरणको साथ हो। यो रूपरेखा हुनेछ तपाइँको ईयू आयात यूनाइटेड किंगडम मा दर्ता गर्न के आवश्यक छ।